ပီလောပီနံဥ ပူတင်း ~ စန္ဒကူး
မစားဖူးဘူးတော့... ကြည့်ရတာတော့ အတော်အရသာ ရှိမယ့်ပုံပဲ... ရှလွတ်... :P
စားဖူးရင်တော့...စားကြည့်ရင်တော့ ဟဲဟဲ .. Good Luck.
စားကြည့်ဖူးဘူး ဒီအတိုင်းလည်းစားဖူးလား မစားဖူးလား စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး မကူးလုပ်ထားတာ စားချင်စရာ မှတ်ထားပြီး နောက်များအခါခွင့်သင့်ရင်လုပ်စားပါဦးမယ်
ပူပူမှာ ပီလောပီနံ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်မှ မရဘဲ ကူးကူးရ။
(တော်လိုက်တဲ့ ကူးစ်စလုံးရောက်ရင် လုပ်ကျွေး ဒါဗြဲ)
မကူးတို. လုပ်လိုက်ရင် အစမ်းချည်းဘဲနော် မစားဘူး
ပိလောပီနန်ဟုတ်ဘူးလား မကူးရေ ... စလုံးမှာတော့ ပရနကန်မုန့်မျိုးစုံရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေမှာရောင်းတဲ့ ပိလောပီနန် မုန့်လေးတွေတော့ စားဘူးပါတယ်။ အုန်းသီးဆန်လေးတွေ ဖြူးလို့ ။ ကြိုက်ပါတယ် ။ ပီလောပီနန်အရသာကို ။ စည်းစည်း စိမ့်စိမ့်လေး။
သိပါဝူးတီတီဆွိရာ.. ကူးကူးက ပီလောပီနံ လို့ရေးတာ ကို မဟုတ်ဘူး.. ကလောပီနံလို့ အကိုကြီးတစ်ယောက်ကလာပြောလို့ ပြောင်းလိုက်တာ.. ဘယ်ဟာမှန်လဲသိဝူး..းx
ပီလောပီနံ လို့ အခေါ်များတယ် ထင်တာပဲ ..
ဟိ ..ကလော ကတော့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း .. ပီနန်က မလေးရှား မှာ ... ကလော နဲ့ ပီနန် နဲ့ဘယ်လို ချိန်းတွေကြသလဲ တိပူး နော် ..း)
ဟိ..စတာ နော် ...
ကြည့်ရတာ စားချင်စရာကြီး တော့ ....
ဗိုက်တောင် ဆာလာပြီ ကူးကူးရေ ..
တတုံးလောက် ကျွေး ပါ .. အို ..မကျွေးလဲ စားသွားပြီ ..ဂလု ..
ပီလောပီနံ ကအမှန်ဘဲ။ ဖတ်တော့ ကလောပီနံဖြစ်သွားတာ။
ကူးလေးရယ် တော်လိုက်တာ။ စားချင်လိုက်တာနော်။
ခုတော့ တံထွေးမျိုချပြီး ပြန်သွားပြီ